शनिबार यी ७ चिज नखानुस्, निम्तिन सक्छ शनिको दशा – List Khabar
Home / रोचक / शनिबार यी ७ चिज नखानुस्, निम्तिन सक्छ शनिको दशा
admin2weeks ago रोचक Leaveacomment 52 Views
एजेन्सी- शनिदेवलाई खुसी बनाउन चाहनु हुन्छ बने शनिबार खाने कुरामा सावधानी अपनाउनुपर्छ।
धर्मशास्त्रको अनुसार शनिबार यी खानेकुरा खाँदा शनि बेखुसी हुने बताइन्छ। के के हुन ती खानेकुरा जुन शनिबार नखाँदा नै बेस हुन्छ।
शनिबार रक्सी सेवन गर्नाले शनि राम्रो भएको बेलामा पनि अशुभ फल मिल्छ। दुर्घटनाको आंशका बढ्ने हुन्छ।काठमाडौँ । खराब खानपान र जीवनशैलीका कारण आजभोलि अधिकांश मानिस विभिन्न समस्याको सामना गरिरहेका छन्। खानामा आवश्यक पोषक तत्वको कमीका कारण मानिसमा थकान, कमजोरी, रगतको कमी र इम्युनिटी पावर कमजोर जस्ता समस्या देखिने गरेका छन्।
यस्ता समस्याका कारण मानिसको यौ’न जीवन प्रभावित बनिरहेको छ। यौ’न स्वास्थ्य र यससँग सम्बन्धीत समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि आयुर्वेदका उपाय अपनाउन सकिन्छ।
Previous आफ्नै पाद बेचेर लखपति बनिन् यी महिला….
Next के तपाइको नङ् टोक्ने बानी छ ? छ भने आजै छाड्नुहोस्, निम्त्याउन सक्छ यस्ता ख’तर’नाक रो’ग